Waxaan hiigsaneynaa inaan bixino adeegyo ka faa'iideysan doona dhammaan macaamiisheena. Waxaan rajeyneynaa inaad ku faraxsan tahay iibsi kasta oo aad sameyso. Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad soo celiso alaabta qaar. Fadlan hoos ka akhri siyaasaddayada soo noqoshada, waxaanu ku dadaali doonaa inaanu ku caawino.
Alaabta soo celin karta
Alaabta lagu soo celin karo/la soo celin karo ama lagu beddeli karo dammaanadda* waxay raacaan shuruudaha hoos ku qoran:
1. Alaab khaldan oo burburtay/jabtay, ama wasakhowday markay yimaadaan.
2. Alaabta lagu helay cabbir/midab khaldan.
Alaabta lagu soo celin karo/la soo celin karo ama lagu beddeli karo gudaha 7 maalmood qaadashada waa in ay raacdaa shuruudaha soo socda:
1. Alaabtu ma buuxin filashadaada.
2. Alaabta aan la isticmaalin, oo leh calaamado iyo lama beddelin.
Fiiro gaar ah: xaaladdan, kama masuul noqon doono soo celinta kharashka dhoofinta.
Shuruudaha Soo celinta:
Alaabta aan tayada lahayn, fadlan hubi in alaabta la soo celiyay aan la isticmaalin oo ay ku jiraan baakidhkii asalka ahaa. Dhammaan codsiyada soo celinta waa in ay oggolaadaan kooxdayada adeegga macaamiisha ka hor inta aan loo dirin ciwaankayaga. Kooxdayadu ma awoodaan inay farsameeyaan wax kasta oo la soo celiyay iyaga oo aan haysan foomka soo celinta alaabta.
Alaabooyinka Aan Soo Celin Karin
Ma aqbali karno soo celinta xaaladaha soo socda:
1. Alaabooyinka ka baxsan 30ka maalmood ee wakhtiga dammaanadda.
2. Alaabada la isticmaalo, la calaamadeeyay ama si khaldan loo isticmaalay.
3. Waxyaabaha hoos yimaada qaybtan:
* Alaabta si loo dalbado, loo sameeyay in lagu cabbiro, walxaha la habeeyay.
Kahor Inta Aan Soo Celin Codsiga
Sabab kasta ha noqotee haddii aad jeclaan lahayd inaad joojiso dalabkaada inta dalabku ku hoos jiro habka rarida, waxaad u baahan doontaa inaad sugto ilaa aad ka hesho xirmada gacanta ka hor intaadan samaynin codsi soo laabasho. Sababtoo ah Rarista-Xuduudka waxay ku lug leedahay habab adag, nadiifinta caadada gudaha iyo caalamiga ah, iyo maraakiibta gudaha iyo kuwa caalamiga ah iyo wakaaladaha.
Haddii aad diido inaad ka qaadato xirmada dirida Boostada ama aadan ka soo qaadan xirmadaada gaarsiinta dukaamada soo-qaadista ee xaafaddaada, Adeegga Macaamiisha ma awoodi doono inuu xukumo xaaladda xirmada oo sidaas darteed ma xamili karo codsiyadaada soo noqoshada.
Haddii baakadda lagu celiyo bakhaarkayaga sababtoo ah Sababta gaarka ah ee macmiilka (hoos ka eeg faahfaahinta), waanu kula soo xidhiidhi doonaa wixii ku saabsan dib-u-bixinta boostada dib-u-celinta (PayPayal) waxaanan diyaarin doonaa soo diritaan. Si kastaba ha ahaatee, fadlan taas faham lacag soo celin la'aan waxaa lagu soo saari doonaa xaaladdan. Faahfaahinta sababta gaarka ah ee macmiilka:
* Cinwaanka khaldan/marayste ma jiro
* Macluumaadka xiriirka aan saxda ahayn/ jawaab la'aan wicitaanada gaarsiinta iyo iimaylada
* Macmiilku waxa uu diiday in uu aqbalo xidhmo/bixinta khidmadda cashuurta/dhamaystirka fasaxa kastamka
* Kuma soo qaadin xirmo waqtiga kama dambaysta ah
Soo celi ciwaanka & lacag celinta
Cinwaanka soo celinta: Waxaad u baahan doontaa inaad u soo dirto alaabtaada soo laabanaysa bakhaarkeena Shiinaha. Fadlan mar walba soo dir"Soo noqo ama Bedel"Email ku soo dir adeega macaamiisha marka hore si aad u hesho ciwaanka soo celinta
Lacag celin: Lacagta soo celinta waxa lagu soo shubi doonaa akoonkaaga bangiga. Khidmada rarida asalka ah iyo caymiska lama soo celin karo.
Ka dib markii la helo codsigaaga soo celinta ama beddelka, Adeegga Macaamiishayadu waxay ansixin doonaan codsigaaga soo noqoshada iyadoo loo eegayo siyaasaddayada, dammaanaddayada, heerka badeecada iyo caddaynta aad bixisay.
Muddada Weydiinta Xirmooyinka La Socon Karo
Fadlan la soco in dhammaan shirkadaha dhoofinta ay aqbalaan kaliya su'aalaha lagu soo gudbiyo Muddada Weydiinta. Haddii aad jeclaan lahayd inaad hubiso xirmooyinka aadan helin, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha muddada loo baahan yahay gudahood. Waad ku mahadsan tahay wada shaqayntaada:
Degdega degdega ah: 30 maalmo laga bilaabo maalinta la raray
* La Degdejiyay Boostada/ Khadka Koowaad/Hawada Dhaqaalaha: 60 maalmo laga bilaabo maalinta la raray
* Adeegga boostada - raadraaca: 90 maalmo laga bilaabo maalinta la raray
Haddii aad u baahan tahay gargaar, fadlan nala soo xidhiidh.